Raha ao anatitsika Jesosy dia olona nateraka indray isika ka tafiditra ho an’isan’ny ankohonan’Andriamanitra.
Jaona 3:3-5“Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray [Na: ateraka avy ambony] ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’ Andriamanitra.Hoy Nikodemosy taminy: Hataon’ ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy.”
- Ny fanjakan’ny devoly
- Ny Fanjakan’Andriamanitra.
- Ny fanjaka’Andriamanitra dia mafy orina
- Jesosy Kristy no Mpanjaka ao
- Zava-panahy izy io, kanefa dia ahazoana miaina ny fiainana ara-nofo.
Hebreo 12:28 “Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana [Na: hanana fanahy misaotra] ho entintsika manao izay fanompoana sitrak’ Andriamanitra amin’ ny fanajana sy ny fahatahorana;”
- Tsy azo ozongozonina ny fiainanao
- Fanjakana tsy azo ampirohorohoana
- Mitoetra tsara ny fiainana, ny fiadanam-po, ny fifaliana.
- Fanjakana matanjaka tsara, Jesosy Kristy no manjaka ao.
Moa ao anatinao tokoa ve JESOSY? Tafiditra ao am-ponao ve lay Jesosy Mpanjakan’ny Mpanjaka?
Io fanjakan’Andriamanitra io dia hiainana ety ambonin’ny tany. Eny an-dalana eny izany dia tokony ho fantatrao tsara fa Mponin’ny lanitra ianao (citoyen des cieux). Manan-jo hiaina izay ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao.
Efesiana 6:11 "Tafio avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ ny fanangolen’ ny devoly.”
Apokalypsy 12: 12 “Ary noho izany mifalia, ry lanitra sy hianareo izay monina ao aminy. Loza ho an’ ny tany sy ny ranomasina! Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, Satria fantany fa kely sisa ny androny.”
1Petera 5:8 “Mahonòna tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany.”
Tandremo, aza miantehitra ny fiangonana, na fikambanana, fa miantehitra ao amin’ny Jesosy Kristy.Ny Ràn’i Jesosy Kristy no jerena, ary ny Fanahy Masina no tombokase. Jesosy ihany no mitondra antsika hiakatra ho any an-danitra.
Lioka 10:19 “Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.”
Matio 10:1 “Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin’ ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ ny rofy rehetra.”
Matio 10:8 “Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.”
- Tsy mahalala ny fahefana nomena Azy ny Kristiana
- Mandà sy tsy mandray ny fahefana nomena azy ny Kristiana.
Asan'ny Apostoly 2:39 “fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’ izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’ i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy.”
- Mampiasa ny Tenin’Andriamanitra : “fa voasoratra hoe:…”
- Mandray ny Tenin’Andriamanitra.
Hebreo 4:12 « Fa velona sy mahery ny tenin’ Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ ny fo. »
Jeremia 23 :29 « Tsy tahaka ny afo va ny teniko? hoy Jehovah, ary tsy tahaka ny kanonta manorotoro ny vatolampy va? »
- tahaka ny afo ny teniko,
- kanota manorotoro.
Efesiana 6:17 “Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’ Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy;”
Hebreo 10:38 “Ary "ny oloko marina [ny marina] dia ho velon’ ny finoana;" Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko [Hab. 2.3, 4] ”
2Timoty 1:7 “Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.”
Iza no manome anao ny Fahefana sy ny Hery? Manao ahoana ny lanjany?
Efesiana 1:21 “ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin’ izao fiainana izao ihany, fa amin’ ny ho avy koa,”
- ny fanapahana rehetra
- sy ny fahefana
- sy ny hery
- sy ny fanjakana
- ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny ho avy koa
- Miditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra
- Miala amin’ny fahamarinan-tena
- Miala amin’ny fahotana
- Tsy fihetseham-po ny fivavahana Kristiana fa fiainana.
Apokalypsy 3:20 “Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.”
Ezekiela 33:11 “Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ ny ratsy fanahy amin’ ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin’ ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty hianareo, ry taranak’ Isiraely?”
Matio 20:1-2 "Fa ny fanjakan’ ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony. Ary rehefa nifanekeny tamin’ ny mpiasa fa ho denaria isan-andro ny karamany, dia nasainy nankany amin’ ny tanimboalobony ireny.”
Matio 20:7-9 “Hoy izy taminy: Satria tsy nisy olona nanakarama anay. Dia hoy ralehilahy taminy: Mandehana koa hianareo mankany amin’ ny tanimboaloboka. Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon’ ny tanimboaloboka tamin’ ny mpitandrina ny raharahany: Antsoy ny mpiasa, ka aloavy ny karamany: atombohy amin’ ireo taoriana ka vao hatramin’ ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin’ ny ora fahiraika ambin’ ny folo, dia nahazo denaria misesy avy izy.”
Hebreo 10:38 "Ary "ny oloko marina [ny marina] dia ho velon’ ny finoana;" Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko [Hab. 2.3, 4]”
Apokalypsy 21:8 “Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin’ ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa.”
Isaia 40:29 “Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be.”
I Jaona 5:19 “Fantatsika fa avy amin’ Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin’ ilay ratsy avokoa.”
Aza manantena na inona na inona eto amin’ity izao tontolo izao ity ianao rahefa tafiditra ao amin'ny fanjakan’Andriamanitra, fa ao no misy ny fahasoavana rehatra.
- Midira ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra
- Ampiasao ny fahefana sy ny hery
- Raiso ny Tenin’Andriamanitra